Heerarka gulukooska dhiigga - iSearch
Start farmashiye caafimaadka heerka sonkorta dhiigga
1 heerka sonkorta dhiigga
2 Sonkorta dhiigga ee sonkorta leh iyo macaanka
3 Hypoglycaemia waxaa sabab u ah insulin la'aanta
5 Calaamadaha diabetes mellitus
6 Labo nooc oo cudur ah
7 Qaababka gaarka ah ee nooca 2
8 Talooyinka loogu talagalay cudurka macaanka
9 Insulin: hormoonka muhiimka ah
10 Accu Chek Maqaarka sonkorta dhiiga
10.1 Ma raadineysaa mashiinka Accu Chek Blood Glucose?
10.2 Tusaalooyinka 'Accu Chek Blood Pressure Monitor' Aviva iyo Aviva Nano
10.3 Qaabdhismeedka Accu Chek Blood Glucose Model Mobile
12 Ma waxaad raadinaysaa Accu Check Smart Pix?
13 Isku waafaqsanaanta Accu Check Smart Pix si aad u ogaato waxyaabaha kale ee Accu Check
14 Qiimeynta xogta gulukooska dhiigga ee AccuCheck Smart Pix
15 Isticmaalka Accu Check Smart Pix
16 meter sonkorta dhiigga
17 Waa maxay gulukooska dhiigga
18 Qiyaasaha cabbirka sonkorta dhiigga
19 Xaaladaha guud ee cabbiraadda gulukooska dhiigga
19.1 foomka bilowga
20 Sonkorowga uurka kadib dhalmada
20.1 Inta lagu jiro dhalmada:
20.2 Kadib dhalashada:
20.3 Ilmaha soo socda:
21 Imtixaanka dulqaadashada ee afka laga qaato ee afka
21.1 Sidee u diyaargaroobeysaa?
21.2 Aan tagno!
22 Dhirta oo dhan - waxay u fiican tahay sonkorowga
22.1 Baruur caloosha oo yar oo dhan hadhuudh
23 Shuruudaha magnesiumka badanaa waxay kordhaan inta lagu jiro xagaaga
24 Sababtoo ah ninkii asaliga ahaa wuxuu u nuugay magnesium ku filan
24.1 Magnesium ka badan oo firfircoon oo firfircoon
24.2 Xagee ayuu magnesium qaataa?
24.3 Calaamadaha maqnaashaha magnesium
24.4 Hubi tayada daawooyinka magnesium
24.5 Cawaaqibka xad-dhaafka ah
25 "10 daqiiqad daryeel xanaano" - Cagaha sonkorta leh ee aragtida
26 Maxay daaweynta cagaha muhiim ugu tahay sonkorowga?
27 Xilliga kuleylka gaar ahaan: maxay tahay khabiirka cilmi-baarista?
28 Dhiirrigelinta dadka qaba cudurka macaanka
29 Dhiirrigelinta iyo macaanka
30 Dhiirrigelinta iyo saameyntiisa
31 Waa maxay arteriosclerosis?
32 Sidee ayuu aspirin uga caawin karaa arteriosclerosis?
33 Natiijooyinka barashada niyad-jab
34 Isboortiga buuraha iyo cudurrada wadnaha
ka heerka sonkorta dhiigga ku ogow xoojinta gulukooska ee dhiigga. Haddii qiimahaas aaney ka badneyn heerka caadiga ah, ka dibna mid ka hadlaya sub-ama super-sonkor.
Qiimaha gulukooska dhiigga badanaa waxaa lagu go'aamiyaa shaybaar. Hase yeeshee, waxaa jira miisaanka sonkorta dhiiga la qaadi karo, kaas oo u oggolaanaya bukaanku inuu qiimeeyo qiimaha uu maalin walba leeyahay iyo inuu si fudud u akhriyo. Tani waxay ka dhigeysaa inaan loo baahneyn in ay tagaan booqashada dhakhtarka. Qalabka wax lagu cabbirayo ee la qaadan karo waxaa soo qori kara dhakhtarka kuxigta oo leh calaamad ku habboon oo markaa waxaa badanaa lagu qaadaa sharciyada iyo shirkadaha caymiska caafimaadka gaarka ah.
Sonkorta dhiigga ee sonkorta leh iyo macaanka
Qaadista dhiigga waxay dhici kartaa subaxdii kahor intaan cuntada la qaadan. Mid ka mid ah oo ka hadlaya waxa loogu yeero sonkorta dhiigga oo aan caadi ahayn. Dhiibitaanka dhiigga ka hor cuntada ka hor, waxaa loo yaqaannaa sonkorta dhiigga ee hore. Waxaa sidoo kale jira sonkorta dhiiga kadib. Tani waxaa la cabiraa dhowr saacadood ka dib cuntada.
In kororka joogtada ah ee sonkorta dhiigga ayaa ka hadlaysa sonkorowga macaanka. Gulukoos looma geyn karo unugyada. Tan waxaa lagu gartaa khatarta cudurro halis ah iyo cudurro kale. Sonkorowga mellitus badanaa wuxuu ku shaqeeyaa waqti dheer oo aan lahayn calaamado, sidaa daraadeed nasiib daro waxaa badanaa la aqoonsadaa goor dambe. Kaliya marka qiimaha gulukooska dhiigga uu ka sarreyso qiimaha muhiimka ah ayaa cudurku noqonayaa mid muuqda. Calaamadaha caadiga ah waa daal, miisaanka luminta, haraadka, cuncunka, infekshinka kaadida, cudurada guud, dhibaatooyinka muuqaalka iyo sidoo kale baabuur iyo awood la'aan.
Xaaladda sonkorowga muddada dheer, dhibaatooyinka badanaa way dhacaan, gaar ahaan haddii qiimaha gulukooska dhiigga si liidata loo qaabeeyey muddo dheer.
Si looga hortago hypoglycemia, waa in aad had iyo jeer wax cunto waqtigeeda oo kugu filan. Ciyaar, jimicsiga jireed iyo sidoo kale walbahaarka ayaa isticmaala sonkorta dhiiga (sonkorta). Haddii aad sonkorta ku jirto, waa inaad cuntaa ama cabtaa wax macaan. Bukaannada qaba hypoglycemia waa in ay had iyo jeer qaataan xirmo degdeg ah oo iyaga la socda si ay awood ugu yeeshaan inay kor u qaadaan qiimaha gulukooska si dhakhso ah haddii ay dhacdo hypoglycemia. Khamrigu wuxuu kor u qaadi karaa hypoglycaemia, waana in markaa loo qiyaasaa oo kaliya inta ugu macquulsan.
Hypoglycaemia waxaa sabab u ah insulin la'aanta
Waxaa jira insulin la'aanta natiijada insulin la'aanta. Tani waxay yeelan kartaa sababo kala duwan, sida qaladaadka daaweynta sababtoo ah qiyaasta insulin khaldan, infakshanka, uurka ama isbeddelka dheellitirka hormoonka. Sonkorta dhiigga oo hoos u dhacda ayaa sii kordheysa inta badan aan la ogeyn, sababtoo ah calaamadaha hore ee korodhka qiimaha sida daal iyo awood la'aanta ayaa inta badan la qiimeeyaa, looma qaadin si dhab ah ama loola dhaqmo si aan ku filneyn. Karkajinta waxaa sababa qulqulo badan. Heerka sonkorta dhiigga oo kordhay ayaa la yareyn karaa cuntada iyo jimicsiga, kiniinnada iyo insulinta.
Cuntada iyo maaddooyinkooda ayaa saameyn weyn ku leh cudurka. Glucose, tusaale ahaan, waa walax sidaas oo kale ayaa si toos ah ama si aan toos ahayn loo cunteeyey sida carbohydrate qaabka sonkorta. Glucose oo ah bixiyaha tamarta ayaa keli ah shaqadiisa marka uu gaaro unugyada. Insulin ayaa mas'uul ka ah tan.
Iyadoo isbedelka hab nololeedku uu ku dhici karo si kastaba ha noqotee gacanta hoostiisa, taas oo sidoo kale waliba tayada nolosheeda mar kale kor u qaadeyso.
Cudurka sonkorowga ee latka: macaanka diabetes mellitus wuxuu la xiriiraa heerarka gulukooska dhiigga oo sarreeya. Sababta tani waa la'aanta insulin (hormoon ka mid ah beeryarada) ama u adkaysiga insulinta. Tani waxaa loo baahan yahay si looga hortago sonkorta cuntada. Dhammaan carbohydrateska ayaa hoos udhaca gulukooska inta lagu jiro dheefshiidka.
Calaamadaha diabetes mellitus
Calaamadaha cudurka macaanka waa miisaan aan la garanaynin, haraad joogto ah, kaadida joogtada ah, daal, daal, iyo u nugulaanta cudurka.
Labo nooc oo cudur ah
Waxaa jira laba nooc oo macaan ee sonkorowga: nooca 1, taas oo ay sabab u tahay saameeynta hiddaha, kuna qor 2, oo sidoo kale loo yaqaan 'diabetes age'. Foomka koowaad, la'aanta insulin ayaa jirta, tan labaadna, wax dhib ah ma laha hormoonka. Nooca sonkorowga 1, insulinta waa in maalin walba la geeyaa jidhka iyada oo la isticmaalayo siriinjo, nooca sonkorowga 2, sidoo kale waxay noqon kartaa mid ku filan miisaanka lumo ama cudurku waa la daaweyn karaa kiniinno. Nooca sonkorowga 1 ma ahan mid la daaweyn karo, insulinta waa in laga quudiyo jidhka.
Qaababka gaarka ah ee nooca 2
Diabetes-da la xidhiidha ayaa badanaa lagu helaa fursad ay ku helaan baadhitaan caafimaad oo caadi ah. Marxaladaha ugu horreeya ee iska caabinta insulin waxaa magdhow laga helaa xaqiiqda ah in beeryaradu soo saarto hormoonka ku jira tiro badan. Habkani waa, si kastaba ha ahaatee, marka loo eego dakhliga kasta, markaa heerka gulukooska dhiigga ee bukaanku wuu kordhaa. Marka la barbardhigo: Caadi waa qiimo miyir leh oo ah 70 ilaa ugu badnaan 100 mg / dl.
Qiimaha joogtada ah ee gulukooska ee dhiigga ayaa kor u qaada maraakiibta dhiigga, taasoo keeni karta kelyaha iyo indhaha indhaha, istaroogga, infekshanka miyir-qaadiga iyo dhaawaca dareemayaasha. Cagaarshowga waxaa laga yaabaa in lagu qaado sifeynta, ama lugta ayaa laga yaabaa in la gooyo sababtoo ah dhaawacyada vascular.
Talooyinka loogu talagalay cudurka macaanka
Sidaa darteed waxaa muhiim ah in la qiyaaso heerka gulukooska dhiigga inta ugu badan ee suurtogalka ah marka cudurka sonkorta uu dhaco. Noocyada sonkorowga 1 waa inay awoodaan inay dhaqdhaqaaqaan oo ay cunaan cunto caafimaad leh: ma aha wax aad u badan, oo aan ahayn dufan, fiyuus ku filan, khamri yar. Sidoo kale waxay khuseysaa noocyada 2 diabetics, oo kaliya in ay yareeyaan inta ugu badan ee suurtogalka ah iyo in badan oo dhaqaaqa. Cuntada sonkorowga macquul ma aha in loo tixgeliyo lagama maarmaan. Waa muhiim in jeegareynta joogtada ah lagu qiimeeyo qiimaha sonkorta, oo aan aheyn mid aad u sarreeya oo aan aad u hooseeyn, labadaba waa halis, sonkorow badan oo sonkor ah iyo hypoglycaemia. Haddii la ogaado hypoglycemic, glucose waa in si dhaqso ah loo siiyaa jirka, tusaale ahaan qaab glucose ah.
Insulin: hormoonka muhiimka ah
Cuntadayadu waxay ka kooban yihiin sadexda dhismood ee baruurta, borotiinka iyo karbohidratka. Marka cuntada la nuugo, waxay gashaa caloosha iyo mindhicirka, karbohidraatka ayaa loo beddelaa glucose, waxayna ka gudbaan iyada oo loo marayo derbiga mindhicirka ee dhiigga. Marka lagu daro dufanka, glucose waa ilo tamareed oo loogu talagalay urur kasta oo muhiim u ah shaqada maskaxda, kelyaha iyo unugyada dhiigga cas. Si loo xakameeyo xaddiga gulukooska ee dhiigga, waxaa jira laba hormoon oo kala duwan, kaas oo jirka ka soo baxa iyadoo ku xiran xaddiga gulukooska dhiigga. Insulin wuxuu leeyahay hantida hoos u dhigeysa heerarka gulukooska dhiigga, halka glucagon uu kordho.
Insulin waxaa lagu sameeyaa unugyada beta ee boogaha. Goobta saxda ah waa qaybta yaryar ee unugyada Langerhans. Soo saaridda insulinta ayaa badanaa la bilaabaa intaa ka dib marka la qaato cunto karbohidratka oo hodan ah tan iyo heerkulka gulukooska dhiigga. 10 Milligram waxay had iyo jeer ku jirtaa xameetada beedka, taas oo inta badan ku dhacda shan maalmood. Xusuusta waa la buuxiyaa marka la qaybiyo. Miisaanka si deg deg ah ayaa hoos u dhigi kara gulukooska ka yimaada dheecaanka unugyada iyo dheecaanka dhiigga gudaha gudaha gacanta. Halkaas waxaa ku jira tamarta looga baahan yahay jirka ama kaydinta qaadata qaab glycogen ah. Nidaamyadani waxay muujinayaan muhiimadda muhiimka ah ee hoormoonka.
Qofka caafimaadka qaba, heerka gulukooska ee dhiigga waa caadi caadi ahaan 60 - 100 mg / dL marka caloosha la qooyo iyo maalinta isbeddeleyso. Cadaadiska, dhaawacyada culus, caabuqyada, hawlgallada ama wadne-qabadka wadnaha ayaa kordhiya heerarka gulukooska ee dhiigga, laakiin maaha wax calaamado ah oo diabetes ah. Dhiigga 'hyperglycemia' waxaa badanaa keena hab nololeed aan fiicnayn iyo caafimaad la'aan ah waxaana laga hortagi karaa iyadoo la adeegsanayo tallaabooyin ka hortag ah. Kuwa badanaa la kulma sonkor dhiig oo sarreeya waxay halis u yihiin cawaaqibka caafimaadka ee la xidhiidha horumarinta cudurka sonkorowga. Xoogaa yar ee qiimaha ayaa laga horjoogsan karaa isbeddel cunto, taas oo ay tahay in cuntada ay ku yar tahay dufanka iyo karbohidraatka iyo hodan ku jirta faytamiin iyo fitamiino. Haddii qaanuunkan aasaasiga ah la arko, waxaa suurtagal ah in la sameeyo iyada oo aan la siin cirbadaha dheeraadka ah ee insulin beddelidda. Qofka ay dhibaatadu saameysey waa in la qaataa si aad u daran, kaadi sonkorow, sababtoo ah qalad ama qaloocid la'aan ayaa ku dhici kara dhaawacyada dheecaan, stroke, weerarada wadnaha ama sidoo kale loogu yeero Zuckerkoma.
Accu Chek Maqaarka sonkorta dhiiga
Ma raadineysaa mashiinka Accu Chek Blood Glucose?
Haddii aad leedahay a Accu Chek Maqaarka sonkorta dhiiga waxaad dooratay badeecad sumcad leh. The Roche Bioscience Germany GmbH bixiya 2011 qalab ah therapy bamka insulinka iyo saddex qalab kala duwan oo fudud Blutzuckermesssung la hawlgalka batteriga.
Qiyaasta ugu muhiimsan waa saxnimada cabirka, maaddaama ay ku saabsan tahay caafimaadka iyo go'aannada daaweynta ee la qabanayo markaas kadib. Roche ayaa ujeedada u ah saxnaanshaha ugu sarreeya ee ku yaal magaca "Accu Chek" ee miisaanka gulukooska dhiigga.
Accu Chek Aviva Nano, Accu Chek Aviva iyo Accu Chek Mobile si fiican u shaqeeya, si fudud oo si tartiib ah u ilaalinta sonkorta dhiiga. Way fududahay in la isticmaalo, ku dhawaad ​​is-sharax, is-qabad iyo sidoo kale rafcaan arag. Heshiiska Accu Chek, Accu Chek Compact, Accu Chek Comfort iyo Accu Chek Sensor kuma jiraan wax soo saarka.
Waxaa sidoo kale jira CD-ga si gooni ah loogu talagalay oo loogu talagalay Maaraynta cudurka macaanka PC-da, software-ka Accu Chek 360. Laakiin waxaad ubaahan tahay fiilada Realtyme USB ee saxda ah. Xogta la qiyaasay waxaa laga soo qaadan karaa mitirka Accu Chek waxaana lagu keydiyaa joornaalada runta ah oo la qiimeeyo.
Haddii aad rabto sahlan, dooro Akhri Chek Smart Pix Data Extractor, kaas oo aan u baahneyn barnaamijyo dheeraad ah. Qiimaha gulukooska dhiigga iyo qiimaha insulin-ka ayaa laga akhrisan karaa qalabka la heli karo, xitaa noocyada hore ee qalabka.
Tusaalooyinka 'Accu Chek Blood Pressure Monitor' Aviva iyo Aviva Nano
Laba qeybood oo leh calaamad yahanka Aviva waxaa lagu qiyaasaa hal xariiq. Qalabka qiyaasta amerometrikada dhiiga waxaa lagu nuugay gudaha gudaha iyada oo loo marayo kondhilis iyo baaritaan lagu sameeyay elektaroonik ahaan. Iyada oo ku xiran heerka sare ee gulukooska ee dhiigga, waa qiyaasta korantada ee korantada.
Qiimaha waxaa soo bandhigay Accu-Chek meter gulukooska ee dhiigga ee qaab shiday shan ilbiriqsi gudahood oo loo baahan yahay oo kaliya 0,6 microliters dhiigga. Akhriska 500 waa la badbaadin karaa. Iyadoo ay uga mahadcelinayaan isku-xirka casriga ah ee isku-dhafan, kuwan waxaa si toos ah loogu gudbin doonaa kombuyuutarka iyadoo la isticmaalayo qalab farsamo oo hore loo soo sheegay
Accu Chek Aviva ayaa lagu rakibay aaladda qiyaasta iyo qalabkii ugu horeeyay ee qalabka wax lagu dalxiiso, qalabyada tijaabada ah, lancets iyo buug u dhigma waa hordhac wax ku ool ah. Sida magaca Accu Chek Nano horeyba u muujiyey, qalabkani waa mid aad u yar, miisaan yar, meel walba waa la xiri karaa waxaana uu ku raaxaystaa gacanta.
Qaabdhismeedka Accu Chek Blood Glucose Model Mobile
Roche waxaa sharaf abaalmarinta maanta duurka ku of design, fududaato in la isticmaalo iyo hal-abuurka inay heshay ay nidaamka qiyaasta sonkorta dhiigga oo mobile Accu Chek in 2011. Naqshadda guuleysiga, qalab ayaa caqabad ku ah seddex abaalmarin kali ah. Marka la bixiyo abaalmarinta guduudka cas iyo labo jeer abaalmarinta Plus X. Mitirkan uma baahna hal xaraf. Qalabku wuxuu ku sugnaa 2009 tan iyo dayrta, laakiin mararka qaarkood waxay qaadataa wakhti yar.
Gudaha waa shaybaar leh konton konton baaritaanno oo u shaqeeya sida cajalad aan dhammaad lahayn. Ma jiro hal xaraf oo laga soo saaro dibadda. Qalabka ku jira waa dabo oo leh lix xabbo oo loogu talagalay tijaabinta dhiigga.
Qalabkan qalabaysan ee isku dhafan waxaa lagu magacaabaa Accu Chek FastClix Mobile. Duufaankani iyo cajaladdaas ayaa si sahal ah loola xiriiri karaa. Tani waxay badbaadineysaa seddax meelood oo fiican oo ka mid ah wakhtiga iyo shaqo-socodka loogu talagalay baaritaanka gulukooska ee "Accu Chek blood glucose".
Accu-Chek Mobile mg / dL, 1 bandhig
Nasiib wanaag, kaliya 0,3 microliters oo dhiig ah ayaa loo baahan yahay, taas oo ah kalabar kala duwan oo ah qaabka Aviva. Sidoo kale qanacsanaanta ayaa ah maaraynta xogta wayn, oo kaydin karta biilka shan boqol oo qiimaha leh. Ku wareejinta kombuyuutarku wuxuu kaloo ka shaqeeyaa interfiyarta korantada. Qiyaasta sonkorta dhiiga ee Accu Chek ayaa hadda bixisa ugu sareysa
Ma waxaad raadinaysaa Accu Check Smart Pix?
Der Accu Check Smart Pix waa qalabka saxda ah ee lagu qiimeeyo qiimaha akhriska ee taxanaha Accu Check iyada oo la adeegsanayo casriga korontada ee PC. Xaqiiqdii waa isku xirnaanta qalabka kala duwan ee taxanaha Accu Check iyo PC. Sidaa daraadeed, sonkorta dhiiga iyo insulin ayaa si dhakhso ah loona kaydin karaa kombuyuutarka waxaana si qumman loo baari karaa loona qiimeeyaa.
Sidaa daraadeed macaan kastaa wuxuu ku kaydin karaa xogta oo kaliya maaha ogeysiis gaaban oo keliya, laakiin sidoo kale wuxuu abuuraa xusuus qor xanuunkiisa PC-da. Xaaladda kiiska, tani waxay sidoo kale siin kartaa dhakhtarka muhiimadda muhiimka ah marka qiimahaas la ururiyo muddo dheer.
ACCU CHEK Smart Pix 1 Indhaha
Isku waafaqsanaanta Accu Check Smart Pix si aad u ogaato waxyaabaha kale ee Accu Check
Mitirka dhiigga waa wax faa'iido leh. Tani waxay muujinaysaa qiimaha gulukooska dhiigga ee ilbiriqsiyada isla markaana si dhakhso ah dib ayaa loogu dhaqaajin karaa haddii loo baahdo. Marka xasuustaadu buuxsanto, qiimaha lama kaydin karo.
Hadda xal kale ayaa loo baahan yahay taasina waxay ku jirtaa mitirka gulukooska dhiigga ee taxanaha Accu Check Accu Check Smart Pix si aad u hesho. Qalabka miisaanka ku haboon waxaa lagu xidhi karaa PC tan iyada ahna qiimaha sidaas ayaa loo akhrin karaa loona gudbin karaa. Tani waa suurtogal ah in lagu xiro Pocket Compass 3.0 for handheld iyo sidoo kale waxyaabaha soo socda:
Accu CheckMobile, Accu Hubi Aviva, Accu Hubi Compact Plus, Accu Hubi Compact, Accu Check shidma, Accu Hubi raaxada, Accu Ruuxa Check, Check Accu D TRONplus iyo Mate Accu-Chek unit codka Voice Plus.
Haddii aad leedahay mid ka mid ah qalabka, waa inaad sidoo kale tixgelisaa inaad iibsato Accu Check Smart Pix. Sababtoo ah markaa ma jirto cabir dheeraad ah iyo alaabta software waa lagama maarmaan, wax kasta oo kale waxaa sameeya Smart Pix.
Qiimeynta xogta gulukooska dhiigga ee AccuCheck Smart Pix
Haddii aad leedahay Accu Check Smart Pix, waxaad u isticmaali kartaa inaad u wareejiso qiimaha ugu kala duwan ee laga qaado Accu Chec-ga sonkorta dhiiga ilaa PC. Laakiin tani ma ahan mid ku filan, sababtoo ah waxaa jira sidoo kale PC-ga fursadaha xulashada kala duwan.
Sidaa daraadeed, isticmaaluhu wuxuu heli karaa labaatan matalaad oo kala duwan oo ah qiimaha la soo dejiyey oo sidaas awgeed waa mid aad u xor ah ilaa qiimeynta shakhsiga ah ee xogta ay khuseyso. Tusaale ahaan, koorso dhamaystiran ayaa la soo bandhigi karaa, laakiin tirakoobka maalinlaha ah ama toddobaadlaha ah ayaa sidoo kale loo arki karaa. Marka laga soo tago Accu Check Smart Pix, software gaar ah oo iibsanaya wuxuu bixiyaa shaqeyn xusuus qor ah oo loogu talagalay falanqaynta sonkorowga dhammeystiran.
Haddii aad rabto inaad wax dheeraad ah ogaato, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka si aad u qorto oo aad u qiimeyso qiimaha gulukooska dhiigga iyo xogta kale ee muhiimka ah mudo dheer. Waa in la ogaadaa in dhakhtarku uu sidoo kale aad ugu faraxsan yahay bukaanka oo heli kara xogtaas. Tani ma noqon doonto suurtagal la'aan la'aanta AccuCheck Smart Pix.
Isticmaalka Accu Check Smart Pix
Sidoo kale, kuwa ay yaqaanaan PC-ga iyo rakibaadda software-ka iyo qalabka ayaa la yaabi doonaa sida ay u fududahay in ay ku xirmaan Accu Check Smart Pix PC. Iyada oo tanna ma aha software waa in la dhiso, tan iyo markii horeba wax walba lagama maarmaanka u yahay waxaa ku jira baaxadda bixinta.
Sidaa darteed Smart Pix ayaa sidoo kale ku xiran kartaa PC waqti gaaban oo lagu hawlgalo. Horeyba waxaa loo abuuri karaa tirakoobyo iyo sawirro gaar ah. Kuwani waxay qori karaan koorsada daaweynta sidaa daraadeed AccuCheck Smart Pix waa qalab aad u dhiiri gelisay.
meter sonkorta dhiigga
Tani waxay sabab u tahay fal-celin kiimikaad ee kiimikooyinka ku jira dhiigga, kaas oo la qiimeeyo oo lagu muujiyo mitirka gulukooska dhiigga.
Ilaa dhowr sano ka hor, waxay ahayd caado ahayd in la ogaado qiyaasta gulukooska ee dhiigga gaar ahaan iyada oo loo marayo xariijinta tijaabada indhaha. Hase yeeshee, tani waxay cadeeyeen inay dhibaato ku tahay dadka qaba naafonimada muuqaalka. Intaa waxaa dheer, qiimaha laga helay habkan ma aha mid sax ah, iyo tafaasiil qaldan iyo daaweyn aan sax ahayn inta badan dhacay. Dhanka kale, waxaa jira mitirada gulukooska dhiigga, taas oo sidoo kale u oggolaanaysa dhawaaq ku dhawaaqista qiimaha.
Waxaa jira aalado badan oo sahlan oo u oggolaanaya maareynta xogta la qiyaasay. Kaydinta macluumaadka gudaha waa suuragal. Qeyb ahaan, mitirada gulukooska ee dhiigga ayaa sidoo kale leh interface iyada oo qalabka qiyaasta lagu xiri karo kombiyuutar. Tani waxay u oggolaaneysaa in xogta la gudbiyo. Tusaale ahaan, dhakhtarka awood u leh inuu u wareejiyo qiimaha la go'aamiyay ee faa'iidooyinka noocaas ah. Haddii aad rabto inaad iibsato qalab noocaas ah, waa inaad hubisaa in ay ku kaydin karto ugu yaraan boqol qiyam.
Haddii aad farsamo ahaan aad u yar tahay, waa inaad haysataa qalab sahlan. Xaaladdan oo kale, qalad yar oo qallafsan ayaa suurtagal ah, qiimaha waxaa lagu go'aamiyaa si kaamil ah. Dhanka kale, waxaa sidoo kale jira miisaanka sonkorta dhiigga ee suuqyada, taas oo u ogolaaneysa ka saarida dhiiga, tusaale ahaan, bowdada.
Kala duwanaanshaha qiimaha miisaanka sonkorta dhiiga la siiyay waa mid aad u badan, taas oo badanaa u sabab ah hawlaha dheeraadka ah iyo farsamooyinka farsamooyinka ee kala duwan. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in qiimaha aan la mid ahayn qiimaha iibka, sababtoo ah waqtiga dheeraadka ah ee kharashka iibsashada qalabka tijaabada ee lagama maarmaanka ah ayaa had iyo jeer lagu soo oogaa. Qiimaha dabagalku waxay ka sarraysaa qiimaha qalabka ka dib waqti cayiman ka dib. Waxaa sidoo kale jira kiisaska bukaanka u baahan yahay oo kaliya inuu iibsado qalabka tijaabada ah, qalabka cabirta dhabta ah waxaa bixiya soo-saaraha ama ka soo iibsada shirkadda caymiska caafimaadka.
Waa maxay gulukooska dhiigga
Heerka sonkorta dhiigga ee dhiigga ayaa muujinaya heerka gulukooska ee loogu yeero dhiigga. Glucose waa maaddo muhiim u ah jirka sababtoo ah waxay ka masuul tahay tamarta tamarta. Unugyada dhiigga ee cas iyo sidoo kale halbowleyaasha kelyaha ayaa shaqayn kari waayey glucose dhan. Isku xirka laba hormoon ee peptide ee sii daayay beeryaradu waxay xakameysaa heerka sonkorta dhiigga. Waxay yaraysaa content sonkorta dhiigga ee dhiigga, glucagons waxaa ku qarisay in la kordhiyo dheecaan ee insulin waxa loo sameeyaa si loo saxo qiimaha ay dhacdo kasta.
Qiimaha gulukooska dhiiggu waa qiimo muhiim ah ee daawada maxaa yeelay wuxuu wax badan ka sheegaa xaaladda caafimaad ee bukaanka. Haddii qiimaha korodhay mudo dheer, cudurka macaanku wuu joogaa inta badan. Heerka sonkorta dhiiga ayaa saameyn weyn ku leh waxqabadka maskaxda. Tusaale ahaan, hypoglycemes, taas oo ah, qiimaha gulukooska dhiigga oo aad u hooseeya, waxay yareyn kartaa waxqabadka. Tani waxay badanaa la xiriirtaa sii kordhinta sii-deynta adrenaline, xitaa muruqyada muruqyada iyo dhididka ayaa ah calaamadaha hypoglycemia.
Haddii qiimaha gulukooska dhiigga la qiyaasi karo, tan waxaa lagu sameeyaa iyada oo dhiig ka qaadaya markabka koofiyada. Qodobbo farabadan ayaa horayba u filan. dhiiggiisa la soo wareejiyo aaladda wax lagu baaro, taas oo markaas la geliyo qalabka qiyaaseed haboon sonkorta dhiigga oo qaada xisaabeed ee qiimaha. Qiimaha ayaa markaa lagu muujinayaa millimoles halkii litirba, soo gaabinta waa mmol / l. Iyada oo ku xiran da'da imtixaanka, qiimaha caadiga ah ee sonkorta dhiigga ayaa si weyn u kala duwan. Ilmaha waa in ay leeyihiin qiimaha u dhexeeya 3,3 iyo 5,0 mmol / l, qiimaha sare ee dadka waaweyn 5,0 si 6,1 mmol / l. Haddii qiimaha la kordhiyay, mid ka hadlaya hyperglycemia; haddii natiijooyinka ay aad u hooseeyaan, hypoglycaemia waa la joogaa. Labaduba waa lagama maarmaanka u ah daaweynta, iyo dhakhtarka daweynta ayaa go'aaminaya daaweynta haboon.
Qiyaasaha cabbirka sonkorta dhiigga
Dhanka kale, laba hab oo qiyaaso ayaa loo isticmaalay kuwaas oo loo isticmaalo mitirka gulukooska dhiigga ee laga heli karo farmasiga. Hal dariiqeed ayaa lagu qiyaasaa qiyaasta muraayada indhaha. Dhiiga ayaa laga soo qaataa weel dalooliye ah waxaana loo adeegsadaa xarig tijaabo ah. Maaddooyinka kiimikada ee ku jira faashadda waxay sababaan falcelin dhiig leh. Tani waxay bedeshaa midabka cirifka. Aaladda qiyaasta hadda waxay diiwaan gelin kartaa oo qiimeyneysaa isbeddelkaan midabka. Xoogga iyo mudada dhererka ayaa ah qodobbada go'aanka ah ee lagu go'aaminayo qiimaha gulukooska dhiigga, oo hadda si fudud loo akhriyi karo.
Qaabka labaad ee cabiraadda gulukooska dhiigga waa habka loo yaqaan "amperometric". Qaabkan, koofiyadu waxay xaqiijinaysaa in dhiigga la isku duro iyadoo loo marayo xariijin tijaabo ah oo ku taala goobta tijaabada oo aan laga arki karin dibedda ku jirta mitirka sonkorta dhiigga. Barta tijaabada ee lafteeda, waxaa jira dhowr fiilooyin oo kala duwan oo dhiiggu soo galo. Hadda tamarta korantada ee la qeexay ayaa lagu dabaqayaa xiriirka ka yimaada aalada qiyaasta, xoojinta hadda jirta ee la soo saaro waa la qiyaasay. Qiimaha gulukooska dhiigga ee dhabta ah ayaa hadda la cabbiray waxaana lagu muujiyey kooraska xooggan ee hadda jira.
Sida habka seddexaad, oo loo isticmaali doono mustaqbalka miisaanka gulukooska dhiigga, waa in la sheegaa cabbir aan toos ahayn. Kuwani waa weji-socodka dhaawacyada-aan-la'aanta, taas oo ah, tolida farta ama dhegta la gooyey. Qiimaha gulukooska dhiigga ayaa sidaas loo go'aamin karaa iyada oo aan dhiig la qaadin. Mid ka mid ah suurtogalnimada arrintani waa falanqayn qoto-dheer, taas oo asalka indhaha iftiiminayo. Qiimaha saxda ah ayaa la bixiyaa. Tayada cabiraada gulukooska dhiigga waa la kordhin karaa haddii dareemaha dareemaha ah ee isha lagu hayo. Qiimaha lagu go'aamiyey habkan waxaa loo gudbin karaa qalabka bandhigga iyadoo loo marayo gudbiye. Xulashada labaad ee qiyaasta aan haboonayn ayaa ah isticmaalka laser kaas oo cabbira sonkorta dhiigga iyada oo loo marayo maqaarka. Si kastaba ha noqotee, cabirada aan habooneyn ayaa wali ku jira marxaladda tijaabada.
Xaaladaha guud ee cabbiraadda gulukooska dhiigga
Si loo go'aamiyo qiimaha heerka gulukooska dhiigga sida ugu macquulsan, waafaqsan xaaladaha aasaasiga ah ee aasaasiga ah. Kaliya sidan ayaa natiijada saxda ah loo heli karaa kaas oo u oggolaanaya in yar oo isdhaaf ah oo ka yimaada sonkorta dhiigga ee dhab ahaantii ku jirta dhiigga.
First of all, gacmaha waa in la maydiyaa haddii dhiigga laga qaado baaritaanka. Dhinaca kale, nadaafadda loo baahan yahay waa la hubiyaa, dhinaca kale, wareegga maqaarka ayaa la kordhiyaa, taas oo fududeeya ka saaridda dhiigga. Waxaa intaa dheer, haraaga sonkorta oo weli ku jira maqaarka maqaarka ayaa sidoo kale laga saaraa cuntada taas oo keeni karta qiimo qaldan. Markaad qaadatid dhiigga, waa in daryeelka laga qaadaa in farta aan la faaruqin, sababta oo ah dheecaan ka yimid nudaha hareeraysan ayaa natiijada khilaafaya.
Qeybta tijaabada ah ee loo isticmaalayo qiyaasta waa inay ku habboon tahay qiyaasta qiyaasta, haddii kale qiimo qaldan ayaa la go'aamin karaa. Sidaa daraadeed, cirbadaha tijaabada ah waa in lagu kaydiyaa oo kaliya baakada asalka ah oo aan ku jirin baakadaha kale ee la xirxiray ee qalabka kale ama kuwa wax soo saara.
Xitaa bay'adu waxay saameyn ku leedahay qiimaha la qiyaasay. Haddii hawada qolka waa mid aad u qoyan, sidaa darteed qiimaha waa ka sii sarreeyaa siddeetan boqolkiiba, ama haddii aad u qalalan yahay, at qiimaha a ka yar boqolkiiba toban, mitirka si sax ah aan shaqayn. Tani waxay sidoo kale khuseysaa heerkulka qolka. Natiijadu waa la been-abuuri karaa haddii heerkulku aad u qabow yahay ama xoog badan yahay. Sidaa darteed, heerkulka qolka inta lagu jiro qiyaasta waa inuu had iyo jeer kudhowaad 20 darajo Celsius.
Qiyaasta gulukooska dhiigga lafteeda waa in dib loo cusbooneysiiyaa wakhti caadi ah si loo hubiyo in ay had iyo jeer sax tahay. Tani, sidoo kale sidoo kale sida loo isticmaalo qalabka tijaabada iyo cabbiraadda, akhri tilmaamaha hawlgalka ee qalabka. Talooyin muhiim ah ayaa la siiyaa halkan si loo sameeyo baaritaanka gulukooska dhiigga. Dhakhtarka ama farmashiistaha ayaa sidoo kale ku siin doona macluumaad ku saabsan su'aalaha ku saabsan imtixaanka ama qalabka.
Sonkorowga uurka kadib dhalmada
Ugu horreyntii, waxaan jeclaan lahaa in aan sheego in baaritaanka tijaabada ah ee sonkorowga jadeecada ay tahay mid hore KA DIB Sida caadiga ah, gudbinta ilmuhu ma soo saari doono natiijo faa'iido leh, maaddaama uu sonkorowga uurku sida caadiga ah ka baxayo isla markiiba dhalmada ka dib. Waa xaalad ku-meel-gaadh ah muddada uurka.
Inta lagu jiro dhalmada:
Inta lagu guda jiro dhalmada, hormoono kala duwan ayaa laga soo saaraa jirka dumarka, taas oo saameyn ku yeelan karta heerka gulukooska dhiigga. Haddii ilmuhu dhasho, heerka hooyada ee sonkorta dhiigga waa in uu ku dhex jiifo qiyaasta caadiga ah, maadaama uu ilmuhu awoodi karo in uu helo suckers hoose. Laakiin ha ka welwelin, ahaa sonkorowga uurka oo loo yaqaan oo la ogaaday in kaarka hooyada, waxaad la hadashay oo ku saabsan inta lagu guda jiro waraysiga isbitaalka hooyada, heerka sonkorta dhiigga ee hooyada iyo ilmaha inta lagu jiro iyo ka dib dhalmada waxaa lagula socdaa. Haddii aad leedahay mitir glucose ah, waa in aad tijaabisaa heerka gulukooska dhiiggaaga inta lagu jiro dhalashada. Tani waa wax aabe dhiman kara oo kale. Ilmahaaga waxaa laga yaabaa in la kormeero ka dib si loo hubiyo in dheef-shiid kiimikaadiisu ay si fiican isu dheelitirantahay.
Haddii aad insulin ku mudday inta aad uurka leedahay, ma noqon doonto lagama maarmaan marka aad dhalaysid. Sidoo kale, mitirka gulukooska dhiigga badanaa waa uu ku guuldareystaa. Haddii aad rabto, waxaad samayn kartaa tijaabin joogto ah, si aad u sameysid. Maskaxda ku hay in xaddiga adagi uu ahaa mid ansax ah xilliga uurka. Kuwa aan uurka lahayn, qiimaha xaddidku waa ka sareeya:
miyir leh <110 mg%
Saacadaha 2 ka dib cunista <140 mg%
1. Tilmaamaha Ururka Jarmalka Jarmalka
Waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso baaritaanka dulqaadka sonkorta leh ee dhiigga ah 12 isbuuc kaddib markaad dhalaysid (ama maqaarka ka dib).
Ilmaha soo socda:
Uur kale, baaritaanka tijaabada ah wuxuu noqon karaa mid ka horeeya 25. Usbuuca uurka, sida da'da sii kordhaysa ee haweenku waxay badanaa sii kordhisaa qiimaha gulukooska ee dhiiga hore.
Imtixaanka dulqaadashada ee afka laga qaato ee afka
Sidee u diyaargaroobeysaa?
Waxyaabaha qaarkood waa in la tixgeliyaa si loo helo natiijo lagu kalsoonaan karo. Imtixaanku wuxuu qaadanayaa saacadaha 2, taas oo ah waqti yar oo waxtar u leh. Sidaa darteed dhammaantood waa muhiim in la helo natiijo lagu kalsoonaan karo kadib.
Maalinta ka horreysa waa inaad cuntaa carbohydrate (cunto adag sida rootiga, noodles, baradhada, bariiska iwm.).
Haddii aad qaadato wax daawo ah, kala hadal dhakhtarkaaga inta ay saameyn ku yeelanayaan natiijada.
Horaanba dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn. Ma aha maalin ka dib socdaalka ama wixii la mid ah.
Ugu yaraan saacado 8 kahor intaadan cunin cunto dheeraad ah ama cab cabitaan sonkor ah.
Ha sigaar cabbin kahor iyo waqtiga baaritaanka.
Ha bilaabin baaritaanka ka dib 9.00. Muhiim ah Marka metabolismi sonkorowgu uu raaco jirkaaga maalinlaha ah.
Dhaqtarkaaga ayaa markaa kadib laguu kaxeyn doonaa waxaadna cabbi doontaa xalka ay ku jirto glucose 75. Markaas waa inaad sugto saacadaha 2. Inta lagu jiro waqtigan waa inaad la joogto dhakhtarka! Ha u dhaqaaqin wax badan, waxna ha cunin, ha cabin wax macaan ah, ha cabin. Qaado buug adiga kugu saabsan.
Qiimeynta waxaa sameeya dhakhtarka isla maalintaa, haddii dhakhtarku uu fursad u helo in uu isla markiiba u ogaado baaritaanka gulukooska dhiigga. Haddii kale wuxuu kuu soo celin doonaa qiimeyn oo ugu dambeyntii waxaad qaadan kartaa quraac.
Inta lagu jiro qiimeynta, dhakhtarku wuxuu kuu sheegi doonaa haddii sonkorow ama qadarin (IFG / IGT) ay joogaan.
Dhirta oo dhan - waxay u fiican tahay sonkorowga
Cuntada oo ay ku jirto dhowr kalluun oo ah hadhuudh dhan iyo wax yar oo ah walxo cad oo maalinle ah maalintii ayaa ka ilaalin kara cudurka macaanka iyo, sida laga soo xigtay dufanka daraasadda ee dhawaan. Haddii sonkorowga horey u jirey, hadhuudh caafimaad leh waa inuu ahaato qorshe kasta, maaddaama fibreebyada ku jira ay si qunyar ah u kordhin karaan heerka gulukooska dhiigga.
Wixii cunto caafimaad leh oo miisaaman oo dheellitiran ayaa lagu talinayaa. Hadhaaga buuxa ee rootiga, baastada, bariiska iyo Co. wuxuu ka kooban yahay fitamiin B badan, fitamiin E iyo sidoo kale folic acid. Marka lagu daro macdanta kalsiyum, birta, zinc iyo magnesium, waxa kale oo ku jira fedrado kala duwan ama maadooyin kale oo dhir ah. isku darka Tani ma aha oo kaliya caafimaad ee caloosha iyo mindhicirrada, waxa kale oo ay hubisaa in dheregtaan dheer, maxaa yeelay, badar ah foomka deggan of miraha isu dhan sonkorta dhiigga iyo in laga hortago jamasho cunto.
Baruur caloosha oo yar oo dhan hadhuudh
Daraasado kala duwan ayaa horey u muujiyay in isticmaalka joogtada ah ee alaabta miraha ah oo dhan ay yareyn karto halista nooca sonkorowga 2 ee mudada dheer.
Iyada oo qayb ka ah daraasad dhowaan, cilmi-baarayaasha Tufts University ayaa ogaaday in uu jiro dufan yar oo ka mid ah dufanka aadanaha, taas oo doorbidaysa noocyada kala duwan ee hadhuudhka ah ee alaabada badarka. Kooxda cilmi baarista waxay weydiisey 2.800 dadka waaweyn ee ku saabsan caadooyinkooda cuntooyinka waxayna tijaabiyeen unugyada cagaaran. Natiijadu waxay ahayd in dufanka yar ee caloosha ku yaraa ay ku urursan yihiin kuwii nafaqeeyay cuntooyinka miraha oo dhan halkii ay ka heli lahaayeen alaab cad. Gaar ahaan, tani macnaheedu waa dufanka caloosha ee ku wareegsan xubnaha jirka (ee loogu yeero nudaha adipose viscer) waxay ka hooseeyeen xayawaanka oo dhan. Tani waxaa loo tixgeliyaa in ay tahay sabab udub dhexaad u ah hypertension, cholesterol sare iyo caabbinta insulin, taasoo keeni karta cudur wadnaha ama nooca sonkorowga 2. Cilmi baadhayaashu waxay awoodeen inay ilaaliyaan saameynta wanaagsan ee miraha miraha ah ee dadka isticmaala ugu yaraan saddex qaybood oo ah alaabta miraha ah maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, saameyn togan kama helin kuwa sii waday in ay cunaan waxyaabo badan oo cadcad ah oo ay ku daraan maaddada oo dhan. "Sidaa darteed waa muhiim in la badalo qaybaha cuntada oo aan cunin oo keliya hadhuudhka," ayuu yidhi Nicola McKeown, oo ah qoraa daraasad.
Saameynta wanaagsan ee sonkorowga
Marka la eego sonkorowga, nafaqo ku filan waxay leedahay saameyn gooni ah oo ku saabsan horumarinta iyo koorsada cudurka. Xaaladdan oo kale, waxsoosaarka dhirta oo buuxa ayaa danta gaarka ah u leh sonkorowga sababta oo ah waxay si gaar ah ugu taajirsan yihiin fibreerka waxayna leeyihiin saameyn togan saamaynta insulin iyo sidoo kale heerka gulukooska dhiigga. Waxyaabaha hadhuudhka oo dhan ah waxay bixiyaan xitaa iyo sahayda sonkorta. Miisaanka cuntada ee ku jiraa wuxuu dib u dhigayaa kala-wareejinta carbohydrateska oo ka sameysa caloosha ilaa dhiigga. Waxa kale oo ay hubiyaan in ay xuubka xuubka mindhicirka iyo cadaadiska dhiigga ee hooseeya ee bukaanka dhiig karka.
Professor Dr. Andreas Pfeiffer nafaqada iyo diabetologists ka Hospital Berlin ee Charité University tilmaamay, in qofka macaanka qaba oo doonaya in ay ka leexdaan kibis oo sarreen ah oo dhan waxay kor u sonkorta dhiigga waa fiican helaan oo sarreen ah oo dhan, ayaa mitgebacken taas oo miraha isu dhan. "Dhab ahaantii dhulka, miraha oo dhan ayaa si tartiib ah u gaabiya guluukoosta kor u kaca oo ka badan burka cad," ayaa yidhi khabiir. Wuxu faa'iido ah ee miraha oo dhan si ay "mindhicirka ay adag tahay in crack" iyo in fiber ku jira indigestible sidaas looga hortago korodhka sonkorta dhiigga gaar ahaan wax ku ool ah.
Shuruudaha magnesiumka badanaa waxay kordhaan inta lagu jiro xagaaga
Bilaha xagaaga, xitaa macallimiinta ugu khibrad badani waxay noqdaan kuwo firfircoon ama xitaa cayaaraha. Hal gacan ah oo dhaqdhaqaaq ah, dhaqdhaqaaq xad dhaaf ah wuxuu keeni karaa saameyn aan loo baahneyn oo ku dhaca gobolka aan la aqoon. Qofkasta oo dhidid ku dheela ciyaaraha, wuxuu lumiyaa magnesium badan, natiijo ahaan, wuxuu filan karaa casiraad. Dawooyinku waxay kugula talinayaan qaadashada dheeraad ah ee magnesium.
Jirku wuxuu u baahan yahay magnesium meelo badan oo kala duwan. Waxa loo isticmaalaa in la dhiso lafaha iyo ilkaha, waayo gudbinta falalkooda dareemaha si muruqa ilaa isticmaalka of carbohydrates iyo borotiin ee jirka aadanaha. Si kastaba ha noqotee, tan macdanta waxaa laga helaa kaliya miisaanka hoose ee jidhka bini'aadamka, waa in guud ahaan lagu quudiyo cuntada. Qiyaasta lagu taliyey maalin kasta ee qaangaar ah waa in ay qaan-gaaraan qiyaastii millatariga 300-350. Waxaa laga yaabaa in ay jirto baahi kordheysa oo la xiriirta walwalka jirka ama maskaxda, diabetes mellitus, uurka iyo nuujinta, koriimada, cayaaraha iyo gabowga.
Sababtoo ah ninkii asaliga ahaa wuxuu u nuugay magnesium ku filan
Malaayiin sanadood, dadku waxay ahaayeen kuwo aad u firfircoon, mana u baahneyn nafaqo dheeraad ah oo nafaqo ah. Muxuu maanta ka walwalayaa qiyaasaha maalin kasta lagu taliyey? Waxaa jira dhowr sababood oo looga jawaabayo su'aashan. Mawduuc aad u muhiim ah ayaa ah in cuntada ay awoowayaasheenu aad u badan yihiin vitamiin iyo tan macdanta. Sababtoo ah halkii uu ka shaqayn lahaa warshadaynta caanaha, awowayaasheenu waxay qabteen hilibkooda gaarka ah waxayna qaateen berry cusub. Waxaanu isticmaalnaa inta badan qalabka waxsoosaarida ah. Si kastaba ha ahaatee, cuntada- casriga ah ka saaraysaa cuntooyinka sida caadiga ah ay content dabiiciga ah ee vitamins, macadan iyo fiber cuntada oo iyaga badalay cusbo, baruurta iyo cuntada lagu daro, sida Uli Stein Castle (ee uu shaqada, Handbook dhagax qalcaddii for nafaqooyinka '). Sababtan awgeed, waxa sii adkaanaysa in bani-aadmadu si fiican u cunaan oo ay u dheellitiraan baahiyaha nafaqada ee cuntada oo keliya.
Magnesium ka badan oo firfircoon oo firfircoon
Farqiga u dhexeeya kale ninka heer hoose ah iyo nin ka mid ah jeer casriga ah waa inta badan ay sabab u tahay isbedel ku dhaqdhaqaaqa jirka. Inkastoo dadku si joogto ah u firfircoon yihiin, dadku waxay inta badan firfircoon yihiin waqtiyada qaarkood. Badanaa jidhku badanaa aad ayuu u baahan yahay xagaaga, halka si dhib yar loo dhaqaajiyo xilliga jiilaalka. Dadaalkan aan badnayn waxa laga yaaba inuu keeno xad dhaaf ah, taas oo keenta in jirka uu si dhakhso ah u isticmaalo kaydka magnesium ee jira. Halkaa waxaa ka jira xaqiiqda ah in qofka asaliga ah ee aan u shaqeynin midkoodna uu yahay nooca triathlon ama marathon, mana uu ku riyaaqi doono qorraxdheer. Labadaba waa xaalado aan qorsheyneynin biological ahaan. Tan waxaa xaqiijiyay madaxa Waaxda Isboortiga Isboortiga ee Charité, Campus Benjamin Franklin.
Xagee ayuu magnesium qaataa?
Haddii aad tahay mid ka mid ah ciyaartoyda aadka u xoogan ama sunboobyada, ama si aad u muuqata si xoogan xagaaga: Qof kastaa waa inuu taxadaraa dheelitir la'aanta magnesium. Gaar ahaan, kooxda diabetics, tan iyo halkan, sida laga soo xigtay daraasad ay soo saartay Jaamacadda Stuttgart inta badan waxaa dhici karta in yaraanta magnesium. Sida laga soo xigtay baadhitaan ay leedahay% oo kaliya 11 of insulin iyo 15% ka mid ah ka qayb galayaasha daraasad non-insulin-ku tiirsan qiimaha magnesium fiicnayn. Sababta qiimaha hooseeya, luminta magnesium waxaa loogu yeeraa qulqulka kaadida. Tani waa natiijo ka dhalatey sonkorowga sonkorta dhiigga.
Waxyaabaha daryeelka gaarka ah sida geedo gabbaldayaha ah, siriyalka qamadiga ah iyo alaabada miraha oo dhan, laakiin sidoo kale dhuxusha, lowska iyo digirta ayaa sidoo kale ah alaab-qeybiyeyaasha waxtarka leh si ay u daboolaan baahida magnesium maalin kasta. Haddii alaabooyinkan ay ka tirsan yihiin cuntada caadiga ah, xoogaa magnesium xooggan ayaa dhif ah in la filayo.
Calaamadaha maqnaashaha magnesium
Calaamadaha maqaarka daran ee magnesiumka ayaa kordha murqaha muruqyada iyo murqaha muruqyada iyo sidoo kale inay u nugul yihiin murqaha muruqyada, muruqyada iyo muruqyada faraha. Nadaafad, ciriiri, dhibaatooyin wareega iyo madax xanuun ayaa sidoo kale muujin kara yaraanta magnesium. Haddii aad isticmaasho badanaa aalkolo, kiniinno dheef-shiid kiimikaad iyo purgatives ama aad qaadatid antibiyootikada, waa in aad u qaadatid cuntada dheeraadka leh ee magnesium.
Hubi tayada daawooyinka magnesium
Diyaargarowga Magnesium ma aha mid isku mid ah. Fikradda waa mid aad u kala duwan mana aha dhammaantood magnesium oo ku jira qaab dabiici ah (magnesium citrate). Si kastaba ha noqotee, citrate-ku-celinta caanaha waa mid ku jirta dhammaan cuntooyinka waana in sidaas oo kale ay ku jirtaa kaalmada nafaqada. Cayaartooyadu waa in ay si gaar ah u fiiriyaan qiyaasta sare iyo hubi in alaabta aysan ku jirin sonkor ama macaan macaan.
Cawaaqibka xad-dhaafka ah
Magnitadu wuxuu u dhaqmaa sida fitamiin C: Ka dib markaad qaadato, waxaa si deg deg ah u burburtay. Xaddiga magnesium ee aadka u sareysa ee dhiigga lagama yaabo in laga yaabo in uun laga filayo infusions ama dhaawac kelyo ah. Haddii heerka magnesiumku aad u sarreeyo, si kastaba ha ahaatee, dhacdo halis ah ayaa dhici karta, taas oo sidoo kale saameyn ku leh neefsashada iyo cadaadiska dhiigga. Xaaladaha ba'an, waxay markaa u imaan kartaa kooma.
"10 daqiiqad daryeel xanaano" - Cagaha sonkorta leh ee aragtida
Marka ay timaado mawduuca daryeelka maqaarka, dadka intooda badani waxay u maleynayaan marka hore. Cudurka macaanku waa inuu si taxaddar leh u fiiriyaa cagaha: heerarka gulukooska ee joogtada ah ee dhiigga oo si joogto ah u kordha ayaa keenta in uu lumiyo socodka dhiigga iyo shaqada dareemaha - oo leh cawaaqib dhimasho, sida dhakhaatiirta ku sharraxan waraysiga.
Cudurka macaanku wuxuu inta badan ku dhacaa jirro maskaxeed (neuropathy), taas oo si gaar ah loogu ogaanayo cagaha. Sidee u yimaadaa?
Dhibaatooyinka nacasta ee sokorowga caadi ahaan waxay si toos ah ula xiriiraan heerar muddo dheer ah ama heerka sonkorta ee liita. Dareemayaasha waxay leeyihiin rinjiga sida xadhkaha korontada - iyo rinjigan waxaa lagu weerara sonkorta dhiiga ee korortay. Maaddaama dareenka dareenka uu si gaar ah ugu nugul yahay suulasha, neuropathy waa inta ugu horeysa ee la ogaado.
Maxay daaweynta cagaha muhiim ugu tahay sonkorowga?
Haddii neerfaha ay waxyeeleeyeen neuropathy, bukaanku wuxuu leeyahay hoos u dhicid ama ma dareemo xanuunka: Dhaawacyada yaryar, dildilaaca maqaarka ama hoostiisa oo aan la ogaan dhammaan ama goor dambe. Jeermiska ama fungi ee guska u gala dhaawacyada noocan ahi waxay keeni karaan caabuq daran. Daryeelka cagaha ayaa aad muhiim ugu ah sonkorowga si loo aqoonsado dhibaatooyinka marxaladda hore ama si looga fogaado dhammaantood. Dhibaatada joogtada ah ee cagaha ayaa sidaas awgeed si weyn looga saarayaa.
Waqti intee le'eg ayay macaanku u baahan yihiin in ay maal gashadaan daryeelka cagaha maalinlaha ah? Maxay tahay in ay si gaar ah u fiiriyaan?
Dhammaan waxay ku xiran tahay inta sano ee bukaanku yahay. Bukaanka waayeelka ah guud ahaan wuxuu u baahan yahay waxoogaa ka yar kuwa yaryar. Laakiin waayo-aragnimadayda, dadaalku waa ugu badnaan saacadaha 10-15 maalintii. Diabetics waa in ay marka hore hubiyaan in maqaarkooda ay sii dheeraanayaan kareem maalinle ah. Sidaa daraadeed dillaacista maqaarka ayaa sidaas lagaga fogaanayaa. Maareynta maalinlaha leh muraayad sidoo kale aad ayey muhiim u tahay. Bukaan-socodka ayaa hore u ogaanaya dhaawacyada yaryar oo ay daaweynayaan.
Maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan xanaanada cagaaran ee gurigaaga?
Halkan, mabda'a ayaa khuseeysa: ma jiraan shay fiiqan ama mid fiiqan sida maqaarka ama diyaaradaha xargaha. Maqaarka cagaha ama maqaarka ciddiyaha waa mid aad u nugul oo si sahlan loo dhaawici karo. Si aad u dhinto ciddiyaha, waxaan ku talineynaa foormo quraarad ah, si aad uga saarto boogaha.
Intee ayaa bukaanjiifka hore u haysta neuropathy ilkaha?
Qiyaastii seddex meelood ee bukaankaygu mar hore ayay qabaan neuropathy. Badhtamaha bukaan-socodka, neuropathy ayaa horeyba loo calaamadeeyay.
Sidee calaamadaha cudurka neuropathy u muuqan karaa?
Bukaanno badan ayaa ii yimaada waxayna soo sheegaan maqaarka ama gubashada maqaarka, gaar ahaan habeenkii. Tani waxay sidoo kale loo yaqaannaa astaamahan, taas oo ah, guud ahaan xad-dhaaf ah maqaarka. Calaamadaha noocan ah waa calaamado muujinaya neuropathy bilaabista. Heerka ugu sareeya waxa uu ka hadlaa astaamaha calaamadaha, sida bukaanku lumiyo dareenka cagaha sii kordhaya. Khatarta dhaawaca maqaarka iyo ciddiyaha ayaa si weyn u kordhaya, sababtoo ah dareenka xanuunka ayaa sidoo kale hoos u dhacaya.
Sidee loo ogaan karaa neuropathy bilaabida?
Markuu bukaanku noo yimaado markii ugu horeysay, marka hore waxaanu si fiican u qabannaa xaaladda cagaha. Marka laga soo tago baaritaanka guud ee dhibco yaryar oo jira, maqaarka iyo maqaarka maqaarka, waxaan sameynaa qaar ka mid ah baaritaannada neerfaha, sida baaritaanka forks for tuning. Tani, waxaan ku hayaa bukaanka fargeetada / leexashada foorarka ee meelaha cagaha ee kala duwan oo markaa hubi inta ay bukaanku dareemayaan xayawaanka. Bukaanka qaba neuropathy daran oo aan la kulmin wax xannuun ah xilliga baaritaanka.
Maxay dadka sonkorowga samayn karaan si looga hortago neuropathy-ga marka la kiciyo ama hoos u dhigo horumarka?
Waxyaabaha ugu muhiimsani waa marka koowaad ee isbedelka heerka gulukooska ee dhiigga uu sameeyo dhakhtar takhasus leh ama dhakhtarka qoyska. Qof kasta oo si joogto ah u dhagaysta cagihiisa iyo, haddii loo baahdo, booqo dhakhtarka wadnaha, wuxuu si weyn u yareeyn karaa halista dhaawaca lugta. Sidoo kale jimicsi ku filan waa mid aad u muhiim ah. Cudurka macaanka ee nala siiya annaga ayaa sanad walba la socda kooxda sonkorowga self-help a yar yar oo ku taala Rhine. Bilowga iyo dhamaadka, heerkulka gulukooska dhiiggu waa la qiyaasay. Ka qaybgalayaasha marwalba waa la yaabay, sida dhaqdhaqaaqa nus saacba si waxtar leh u saameeya heerka sonkorta. Heerka sonkorta dhiigga oo hoos u dhacda ayaa sidoo kale hoos u dhigta khatarta cudurka neuropathy. Waxaa intaa dheer, waxaa jira daawooyinka benfotiamin, kuwaas oo horeyba uga hortagaya horumarinta dhibaatada dareemayaasha iyo xanuunada wareegga ee marxaladda hore ee sonkorowga. Cabashooyinka jira sida dareenka xanuunka ee gacmaha iyo gacmaha ayaa sidoo kale si waxtar leh loo yareyn karaa.
Maxay dadka qabtaan warbixinta daroogada 'benfotiamine'?
Mid ka mid ah bukaankayga ayaa qaatay daroogo noociisa oo kale ah sannad gudihii. Waxay leedahay neuropathy xoog leh. Iyada oo iyadana, horumarinta dareenka dareenkeeda ee cagaheeda ayaa la joojiyay iyada oo ay qaadatay - waxayna sheegaysaa in ayan haynin caloosha oo ku jirta digaag kala badh hal sano.
Maxaa dhici kara haddii neeropathy aan la daaweyn?
Jadwalka dambe ee neuropathy aan la daweynin waa dhimasho: cilladaha cagaha, baaqyada, iyo boogaha aan baqdinta lahayn. Haddii jeermisku weli galo isla markaana caabuq lagu daro, cagta cagaarshow wuxuu kobcin karaa - kiis khatar ah xitaa cagta ama qaybaha cagaha waa in laga saaraa.
Haweenku ma waxay u egyihiin cagahooda si ka duwan ragga? Ma jiraan wax khilaaf ah?
Dumarka guud ahaan waxay u eeg yihiin cagahooda marka loo eego ragga. Waxay si caadi ah uga welwelsan yihiin daryeelka iyo quruxda. Si kastaba ha noqotee, marar badanna waan la kulmaa ragga - markii la ogeysiiyo khatarta cudurka neuropathy - waxay u eg yihiin dumarka.
Xilliga kuleylka gaar ahaan: maxay tahay khabiirka cilmi-baarista?
Qofku miyuu cagaha ku socon karaa sida macaanka macaanka?
Asal ahaan waxaad u ordi kartaa sida cagaarshoowga cagaarsho ee xeebta. Si kastaba ha noqotee, haddii ay horeyba u dhacdo neuropathy yar, waxaan si adag uga talinayaa. Khatarta dhaawaca ka imaanaya shey ama fiiqan sida dhagaxyada yaryar, muuska ama hantida xeebta waa mid aad u sarreeya. Nabaro iyo caabuq ayaa dhici kara kuwaas oo ay adagtahay in la daweeyo. Waxay noqon laheyd mid nasiib darro ah, haddii lugta nus-saac ee xeebta ah ay lugta u yeelato si joogto ah.
Sidee ayuu sonkortu u cagajin karaa cagaha maalmaha diiran?
Caadi ahaan, cagaha ayaa kor u kacaya dhibcaha iyo dhibcaha cadaadiska. Bararka iyo barta cadaadiska sida badanaa waa mid yar, barar ammaan ah. Dhibaatada degdegga ah iyo cusbooneysiinta degdegga ah ayaa ku abuuraysa meel qabow oo qabow. Tani waa in aysan qaadan wax ka badan seddex daqiiqo. Maqaarka kale wuxuu noqonayaa mid aad u jilicsan, taas oo dhiiri gelisa jeermiska iyo fungi.
Xilliga xagaaga waxaad jeclaan lahayd inaad xirato kabo fiican, sida naag!
Maxay yihiin fursadaha markaad qabtid xanuunka neuropathy / neerfayaasha hore?
Fikradayda, caafimaadku had iyo jeer waa muhiim. Cagaarshowga qaba neuropathy waa in ay is weydiiyaan su'aasha: Miyaan doonayaa inaan xirto kabo casri ah ama wax ka qabta caafimaadka cagahayga?
Dhiirrigelinta dadka qaba cudurka macaanka
Cadaadis dhiig oo sarreeya iyo macaanka aan dhicin inta badan kaliya wada - sidoo kale waxay leeyihiin in caadiga ah waa in ay ku hadhaan iyo waqtiga inta badan dheer dareemo sidaas ma ah ama waxaa la helin loola dhaqmo. Illaa 80 boqolkiiba dadka qaba sonkorowga Nooca-2 ayaa Qolol dhiig karka iyo sonkorta nooca 1 ay dhacdo in ilaa 40 boqolkiiba kiisaska. arrimaha Khatar ka soo korodha dadka bukaanka ah diabetic la hypertension yihiin dhibaatooyinka cudurka iyo microvascular gaar ahaan wadnaha.
Cadaadis dhiig oo sarreeya waa cudur halis ah. Haddii cadaadiska dhiiggu si joogto ah u kordho, maraakiibta dhiigga ee waaweyn iyo kuwa yaryar oo jidhka siinaya waxyeellada oksijiinta. Xaalado badan, bukaannadu ma dareemaan dhiig-karka sababta oo ah waxay dareensanyihiin inay ku haboon yihiin oo awood badan. Tani, si kastaba ha ahaatee, waxay si weyn u kordhinaysaa khatarta istaroogga. Badanaa, hypertension looma ogaan haddii aysan horeba u lahayn calaamadaha labaad. Haddii sonkorowga iyo hypertension ay si ula kac ah isu-geynayaan, xubnaha uninvolved ayaa si xoog leh u saari kara marka hore. Mid ka mid ah cudurradu waxay jecel yihiin cawaaqibka dadka kale iyo sida kale.
Dhiirrigelinta iyo macaanka
Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa qeexday xadka u dhexeeya cadaadiska dhiigga caadiga iyo sareeya ee 140 / 90 mmHg. Qiimaha ka baxsan tan waxaa lagu magacaabaa cadaadis sare, waa in la daaweeyaa. Intaa waxaa dheer, WHO ayaa sidoo kale qeexday aag loo tixgeliyo cadaadiska dhiigga "caadiga ah" ee ka hooseeya 140 / 90 mmHg. Tusaale ahaan, sonkorowga, tusaale ahaan, tallaabooyinka cadaadiska dhiigga ayaa yareyn kara marxaladan. Talada WHO waa halkan cadaadis dhiig oo ka hooseeya 120 / 80 mmHg.
Dhiig-baxa ama xitaa dhiig-karka, waa xaalad caadi ah badi sonkorowga. Marka la eego la taliyayaasha sonkorowga, qiyaasta 70 boqolkiiba dhammaan noocyada sonkorowga 2 waxay leeyihiin qiime sare. Qiyaastii kow iyo toban sano kadib markii la ogaado tirada ayaa kor u kacda boqolkiiba 80. Si kastaba ha ahaatee, nooca sonkorowga 1, xiriirka ka dhexeeya hypertension iyo diabetesku aad ayuu u hooseeyaa. Laakiin mar labaad, qiyaastii 20 sano ka dib baaritaanka, waxay kordhisay heerarka dhiigga.
Dhiirrigelinta iyo saameyntiisa
Cadaadiska dhiigga oo keli ah ama lala jaanqaadayo waxyaabo kale oo halis ah sida sonkorowga, dufanka dhiigga oo kor u kacay ama sigaar cabbista ayaa weerara xididdada dhiigga. Kuwani waa kuwa ugu caansan dadka caafimaadka qaba oo waxay la qabsan karaan xaaladaha walbahaarka. Si kastaba ha ahaatee, cadaadiska sare ee joogtada ah, ayaa keenaya in si joogto ah loogu dhejiyo derbiga arterial, taas oo keeni karta isbedelka markabka. Kuwaasna waxaa weheliya dhagxaan, calcinta iyo luminta cufnaanta markabka. Markabku wuu sii yaraanayaa, cadaadiska dhiiggu wuu ka sii sarreeyaa. Cadaadiska dhiigga ayaa si joogto ah u calaamadisa calaamaddiisa xubnaha kala duwan: indho xun, wadno xanuun, kelyaha jaban iyo stroke ayaa noqon kara natiijada. Haddii aan la daaweyn, dhaawac halis ah oo ku yimaada xubnaha ayaa dhici kara. Diabetics, khatarta istaroogga waa xitaa toban laab.
Saldhigga daaweynta hypertension, iyo sidoo kale kiisaska daaweynta cudurka macaanka, waa hab nololeed caafimaad leh iyo, marka lagu daro xakameynta gulukooska dhiigga, kormeerka joogtada ah ee dhiig-karka. Qiimaha cabbiraadda cadaadiska dhiigga waa in lala wadaagaa qiimaha gulukooska dhiigga ee xusuusta sonkorowga si uu u awoodo inuu qoro xaaladaha maalinlaha ah ee saameynaya maalin kasta. Aragtida guud ee qiimaha waa aasaaska dhakhtarka si loo dhiso ujeeddada daaweynta iyo in la go'aamiyo daawooyinka loo baahan yahay in la maamulo.
Muhiim u ah bukaanku waa cabbirka joogtada ah ee cadaadiska dhiigga iyo sidoo kale daaweynta qaadashada, xitaa ka dib marka la gaaro hadafka daaweynta degdegga ah. Sida laga soo xigtay lataliyeyaasha sonkorowga, bukaanada cadaadiska dhiig badani ma qaataan kaniinigooda, taas oo ah sababta dad badan oo ay saameysey aysan gaarin qiimaha bartilmaameedkooda. Sababta arrintani waa mid aad u badan. Dhibaatooyinka soo noqnoqda waxay inta badan door ka ciyaaraan Haddii ay kuwaan dhacaan, daawada waa in aan la joojin qof qof aan la fasaxin, laakiin waa in heshiis la galo dhakhtarka.
Issue: Aspirin wuxuu sii wadaa inuu ka hortago arteriosclerosis?
Kuwa ka badbaaday wadna xanuun badanaa waxaa lagu daaweeyaa asbiriin kadib. Bukaanka halista ah ayaa sidoo kale lagu taliyey in ay qaadaan asbiriin mg xinjoojiya maalin kasta si looga hortago wadno-xanuunka. Nooca ka hortagga ayaa hadda loo tixgeliyaa muran.
Maalinta Isbaanishka ee Cudurka wadnaha ee Yurub (ESC), daraasad ballaadhan ayaa la soo bandhigay kaas oo su'aal ka keenay faa'iidooyinka asbiriin si looga hortago weerarrada wadnaha. Daraasaddan, ragga iyo haweenka 3.350 ee ku jira da'da 50 ilaa 75 ayaa ka qaybgalay. Dhamaan kaqeybgalayaasha ayaa horeyba looga helay cudurka arteriosclerosis.
Waa maxay arteriosclerosis?
Arterosclerosis, ciriiriga iyo adkaanta oksijiinta qaada halbowlayaasha ayaa dhacaya. Tartiib tartiib ah oo badan iyo ka badan intooda badan waxay ku ururaan derbiyada marinka xididdada halbowlayaasha. Natiijadu waxay noqoneysaa mid aan hoos u dhicin, laakiin sidoo kale waa mid adag, sidaa darteed dhiiggu si habboon uguma socon karo. Yareynta halbowlayaasha, khatarta ugu weyn ee ah dufka adkaa ee culus ayaa saari doona derbiyada markabka wuxuuna xiraa xididdada. Caaggu wuxuu u horseedi karaa qalab joogta ah oo wadnaha ah iyo in infekshanku uu kicin karo. Nolosha khatar galisa, laakiin aad u xun, waa cillado dhiig-baxa ee lugaha, indhaha iyo gumaarka. Waxay dareensan yihiin inay yihiin kuwo gubanaya, dhibaatooyin muuqaal iyo tabar la'aan. Waxyaabaha ka mid ah sababaha atherosclerosis waa sonkorowga mellitus, quudinta hidaha, qaladaadka saxda ah, jimicsi la'aanta, sigaar cabista iyo ugu yaraan da 'da da' weyn. Marka xaaladaha qaarkood ee loo yaqaan 'atherosclerosis' sida sigaarka, sonkorowga iyo miisaankoodu badan yahay, ayaa khatarta guud sii kordheysa.
Sidee ayuu aspirin uga caawin karaa arteriosclerosis?
Aspirin dhab ahaantii waa magaca kaliya ee loogu talagalay daroogada shirkadda Bayer. Maaddooyinka ugu firfircoon ee diyaarinta waxaa loo yaqaan 'acetylsalicylic acid' waxaana loo soo gaabiyaa ASS. ACE waxay xanuujisaa xanuunka, waxay joojisaa caabuqa waxayna hoos u dhigtaa qandhada. Intaa waxaa dheer, ASS waa in ay ka hortagaan isqoollada iyo taramada xididdada. Bayer waxa ay iibisaa nooc kale oo aspirin ah oo la yiraahdo Aspirin Cardio®. Kiniinada 100mg waxaa loo adeegsadaa maalin kasta si looga hortago dadka qaba cudurada badan ee halista ah ee atherosclerosis. Sida cad, maandooriyaha ma aha mid u dhow sida waxtar leh sidii horay looga fikiray.
Natiijooyinka barashada niyad-jab
In the "Aspirin for Asymptomatic atherosclerosis" daraasadda ka-qaybgalayaasha 3.350 loo qaybiyay laba kooxood: mid ka mid ah group heshay 8 sano daaweynta aan fiicnayn (jaallaha), kooxda kale heshay kasta maalin 100 aspirin mg. Inta lagu jiro sanadahan 8 dhammaan dhacdooyinka caafimaadka sida istaroogga ama weerarada wadnaha ayaa la diiwaangeliyey. Xitaa haddii qalliin lagu sameeyo furitaanka iyo dib u soo celinta markab waa lagama maarmaan, tan waxaa lagu qoray daraasaddan. Ka dib markii la dhameeyo baadhitaanka, si kastaba ha ahaatee, waxay muujiyeen in koox aspirin ka qaybgalayaasha 181 Silec stroke, wadne ama dib u soo celinta vascular. Si kastaba ha noqotee, kooxda xuubka loo yaqaan "placebo" mooyaane, mawduucyada 176 oo keliya ayaa jiray. Baadhitaanka ayaa waxaa runtii aan si gaar ah u abuuray dadka qaba sonkorowga, laakiin dadka sonkorowga qaba dad badan oo ka qaybqaatay. Tan iyo diabetes type-2 waa mid ka mid ah sababaha halista ugu weyn ee atherosclerosis, taas oo aan la yaab leh. Dhamaadka daraasadda, cilmi-baarayaashu waxay tilmaamayaan saamaynta hoose ee ASA iyo Aspirin ee ka hortagga cudurada wadnaha iyo xididdada. Khatarta cudur halis ah lama yareyn karo kiniin yar oo maalintii ah. dadaalka isbedelka nololeed xagga jimicsi badan iyo cunto caafimaad keliya ayaa joojin kara cawaaqib xun ee atherosclerosis.
Isboortiga buuraha iyo cudurrada wadnaha
Waxaa ka mid ah shilalka gawaarida ee buuraha, in ka badan seddex meelood laba meel ayaa ku dhicin guuldarada wadnaha. Hikers iyo kuwa yaryar ayaa ah kuwa ugu saameynta badan. Miyay dadka qaba cudurada wadnaha ku jira ka boodaan socodka iyo barafka?
Dhibaatada wadnaha oo degdeg ah oo dhimasho ah ayaa ku dhacda wadarta guud ee hal ama labo xaaladood qof kasta 1.000. Tani waxay ka dhigaysaa sababaha dhifka ah ee dhimashada, laakiin marka la eego xaaladda xaaladaha degdega ah, xarigga wadnaha ayaa ah sababta ugu badan ee shilalka ka dib dhacdooyinka. Miyuu Bergsport u yahay mid aan caafimaad u lahayn dadka qaba cudurrada wadnaha, sida warbaahin badan iyo dhakhtarrada sheeganaya?
Dhibaatada wadnaha iyo wadnaha oo keena isboortiga buuraha
Socdaalka buuraha iyo barafka ayaa ah kuwa ugu caansan kubada caanka ah. Haddii fasaxyada qaboobaha ama xagaaga, hay'ado badan oo socdaalka ah ayaa bixiya dalxiisyo loogu talagalay goobaha caanka ah ee ugu caansan. Haddii vacationers aqoon hore ama keeni jirdhiska, waayo, isku biimeynta ah sida, hubi shaqeeya safarka, dabcan ma. Sida laga soo xigtay waxbarashada by German Alpine Ururka (DAV), khatarta dhimashada wadnaha lama filaan ah ski la maraya wadno ee la soo dhaafay kor u kacay ku dhawaad ​​100%. Dhinaca kale, kaliya 10% oo ku yaal buurta dabaasha. Gaar ahaan saameysey waa ragga ka soo jeeda 34. Inkasta oo rikoodhka buuraha aan la kicin ee ugu dambeeyay laga soo xigtay 40. Age waa inay ka taxadiraan, khatarta ah in xaalad degdeg ah oo wadnaha la orda sii kordhaya si degdeg ah ilaa 50 ku wareegsan. Sida caadiga ah waxaa uga welwelsan yahay dhaawaca ah dadka uu raacay tallaabooyin taxaddar ah inkastoo cudurada loo yaqaan sida sonkorowga, dhiig karka, subagga iyo cudurka wadnaha: Midkoodna ma ay qaban karaan at imtixaanka ciriiriga guriga, doondoonay talo caafimaad fasaxyada ama waxqabad joogto ah jirka ,
Isboortiga buurta ma aha sababta dhibaatooyinka wadnaha
Sidaas halista ah ee wadnaha iyo wareegga dhiigga failure ma aha hawlaha isboortiga ee dhul buurta, laakiin halkii ay ku la'aanta ah ee diyaarinta ciyaaraha badan oo marmar ah. Haddii aad wakhti lacag la'aan ah ku qaadato inta badan TV-ga, ma filan kartid wax kasta oo maskax ahaan aad ujecel tahay fasax. Dhab ahaantii Tani, si kastaba ha ahaatee, sida inta badan ku barakaceen, sida ay joogaan loo yaqaan cudurka wadnaha laftiisa. Yaa weli hoos u maydho oo uu dawada qalbiga ka hor inta uusan la nightcap ah, si fudud irresponsibly simaha. Xor u ah sida uu dhigayo "Sport waa mid caafimaad leh oo had iyo jeer", kuwa aan tababaran iyo kuwa rikoodhadu mar walba ku dhacaan xaddidaad jidheed. Maqnaanshaha wadnaha ee buuraha ayaa laga hortagi lahaa xaaladaha intooda badan haddii ciyaartoyda jilicsani ay arkeen xeerar amaan ah oo hoose.
Sidee looga hortagaa weerarada wadnaha ee buuraha?
"Shuruudaha aan caadiga ahayn waxay marwalba ka dhigan yihiin walbahaarka noolaha," ayuu yiri Martin Buscher oo ah khabiirka caafimaadka ee Martin Faulhuber oo ka soo jeeda Insbruck. 50% dhammaan xaaladaha degdegga ah ee wadnaha ayaa horay usocda maalinta ugu horeysa ee fasaxa sababtoo ah jimicsi adag, sida, tusaale ahaan, si dhakhso ah u socda bilowga socodka. Sidaas daraadeed Faulhuber iyo Buscher waxay si xoog leh ugu sheegaan in, bilowga socdaalka, tijaabooyinka culeyska iyo baaritaannada ka hortagga ah in ay sameeyaan dhakhtarka si loo ogaado cudurrada wadnaha ee suurogalka ah. Haddii cudurkan noocan oo kale ah la og yahay, waa in la yareeyo waxyaabaheeda halista ah. Taas macnaheedu waa in sonkorta dhiigga iyo heerarka kolesteroolka iyo sidoo kale cadaadiska dhiigga waa in la caadiyan ka hor inta aan la bilaabin safarka. Qof kasta oo isboorti marmar ah, kooras tababarka shakhsi ahaaneed loo qoondeeyey waxaa lagu talinayaa: marxaladaha dheeraadka ah ee roogga culus, waa inaad gurigaaga ku isticmaashaa marxalado dheerad ah iyo boorsooyin. Sidoo kale culeys dheeraad ah oo ay sababaan cimilada si lama filaan ah uga sii daraysa cimilada ayaa horay looga wadi karaa. Dhammaan goobaha jarmalka, Austrianka iyo Swiss iyo meelaha lagu safriyo waxaad u soo wici kartaa 24 saacadaha cimilada iyo bandhigga dalxiiska ee telefoonka ama internetka.
Xirmooyinka tijaabada sonkorta dhiigga Adia, gabal 200, xirmo faa'iidooyin loogu talagalay xakameynta sonkorta dhiigga oo leh tilmaame sonkorow
xargaha tijaabada gulukoosta dhiigga ee Adia (200 St.) oo ku habboon mitirka sonkorta dhiigga adia - marka waxaad tijaabin kartaa sonkorta dhiiggaaga si sax ah oo ku habboon ilaa 200x! Ka raqiisan yahay xargaha kale ee tijaabada gulukooska dhiigga!
Cabbir sonkorowgaaga sonkorowga iyadoo loo eegayo DIN EN ISO 15197: 2015 heerka. Xariijimo tijaabo ah oo macaan oo tayo sare leh, oo sax ah isla markaana qiimo jaban aan la adkaysan karin. Kontroolka tayada joogtada ah.
Xargaha tijaabada sonkorta ayaa ku habboon cabbiraadda heerka sonkorta dhiigga (sonkorta) sonkorowga.
Xargaha tijaabada ah way fududahay in la maareeyo, tusaale ahaan lambarka hore ee qalabka looma baahna. Dhiig aad u yar waxaad natiijada ku heli doontaa kaliya ilbidhiqsiyo 5.
Habboon ayaa ugu habboon nidaamka cabbirka sonkorta dhiigga Adia (mitirka gulukooska dhiigga ee adia), oo aad sidoo kale ka heli karto halkan Amazon.
Deeqda Faa'iidada - SD CodeFree Blood Glucose Meter Set Setter + 50 Dhiigga Qalabka Dhiigga Dhiigga + 100 Dhiigga Lancet Indhaha
Qiimaha yaryar ee sababa qiimo jaban
Badbaadada sare marka la barbar dhigo nidaamyada la barbardhigo
Iska tijaabi meelkasta oo jirka ah oo suurtagal ah iyada oo dhiiggu hoos u dhaco
500 goobaha xasuusta
SD CodeFree tijaabada gulukoosta dhiiga ee dhijitaalka ah ee loo yaqaan '200 pcs'
Qiimo aad u hooseeya imtixaanka
Kaydka badan marka la barbardhigo calaamadaha tijaabada ah ee isbarbar dhiga
In yar oo dhiig ah ayaa loo baahan yahay
Kharashka ugu yar ee xarigga tijaabada ah
Xidhmada Faa'iidada - SD CodeFree Blood Glucose Test Strips 250 Stk.Anzeige
Nidaamka kormeerka gulukooska dhiigga ee waxtarka u leh - kharashyada dabagalka ee aad u hooseeya
Kaydinta sare marka la barbar dhigo nidaamyada isbarbar dhiga
Xaddiga yar ee dhiigga loo baahan yahay
Qiimaha ugu yar halkii suul tijaabada sonkorta
Nutri Firefox 120 kaabsoosha dhiiga sonkorta - soosaarka dhirta, fiitamiinada & macdanta (tusaale. Turmeric, sinjibiil, Ceylon cinnamon, OPC, miraha fenugreek, qaraha qadhaadh, chromium, zinc, biotin, fiitamiin C, B12, D3) vegan bandhigay
SOO SAARIDDA TAUNUS: Annaga oo ah la-taliyayaasha sonkorowga iyo nafaqada, waxaan dadka ka caawinnaa mawduuca sonkorta dhiigga. Iyada oo la adeegsanayo dhismaha Nutrifox, waxaan kugu taageernaa qaab dabiici ah adoo u maraya nafaqeeyayaalka yar yar ee iskudhafan nafaqada.
Dhiig-karka dhiig-karka iyo saliida maskaxda: Raadinta walxaha 'chromium element' waxay muhiim u tahay heerka sonkorta dhiiggaaga iyo dheef-shiid kiimikaadka nafaqada leh (dufanka, borotiinka, karbohaydraytyada). Fiitamiin B6 wuxuu bixiyaa isku-jirka 'homocysteine', glycogen iyo metabolism-ka tamarta.
KU SAABSAN nolol maalmeedkaaga: kaabsooshadu waxay si aad ah hodan ugu ahaayeen inay ku siiyaan taageero dhan ah. Tani waxay faa'iido u leedahay nidaamka difaaca iyada oo ay ugu wacan tahay fiitamiin C iyo zinc, timahaaga (biotin), wadnaha (B1), nidaamka dareemayaasha (folic acid), lafaha (fiitamiin D3 + K2-MK7, magnesium) iyo waxyaabo kaloo badan.
KHATARTA QALBINKA DHAQANKA: Aad ayuu ugu urursan yahay curcuma (curcumin), abuurka canabka (OPC), miraha fenugreek, ginger, Ceylon qorfe, basbaaska madow (piperine), soosaarka caleen saytuunka (oleuropein) iyo qaraha qadhaadh.
Waxaan xubin ka nahay ururka NEM waxaanan si toos ah ugu diyaarinnaa cuntooyinkeenna si toos ah khubarada. Muuqaalka gaarka ah: Thanks to geedi socodka casriga ah, uma baahnin wax buuxiyeyaal, wakiilo siidayn ama waxyaabo kale oo lagu daro.
SD CodeFree Mitirka Gulukoosta Dhiigga oo ay ku jiraan Xarig Baaritaan, xirmo STARTERKIT mg / dL oo ay ka mid yihiin xirmo tijaabinta gulukoosta dhiigga iyo shaashadda dhiigga.
Qarashka ugu yar ee sahayda qiimaha jaban!
500 booska kaydinta! Waxaa ka mid ahaa: SD Codefree meter 10 SD Code strips imtixaanka Free 10 SD eebooyin Code Free, Qalabka daloolinta, batariyo, kiiska, buuga user, guide bilowga deg deg ah, sonkorowga qaba qorka
Kaabsoosha gulukoosta dhiiga ee Vihado oo leh Ceylon Cinnamon, OPC Extraw Seed Extract, Olive Leaf Extract iyo Macdanta Chromium, Zinc, Magnesium, 60 Capsules Indicator
BULOD SUGAR MIRROR: Qaaciddada la diyaariyey waxay gacan ka geysaneysaa dayactirka heerarka sonkorta dhiigga caadiga ah iyadoo la raadinayo maadada chromium element!
METABOLISM: zinc wuxuu gacan ka geystaa dheef-shiid kiimikaad dufanka caadiga ah, magnesium waxay ku kordhisaa dheef-shiid kiimikaad caadi ah!
KHUDBADAHA QORSHAHA: Hal cabir maalinle ah waxaa ku jira 150mg Grape Seed Extract OPC 27: 1, 350mg Ceylon Cinnamon Extract 10: 1, 110mg Olive Leaf Extract 8: 1!
SI DHAMMAAN OO KU SAABSAN: Waxyaabaha loo yaqaan '6' oo ka kooban hal shey - maaddooyin dabiici ah oo la xaqiijiyey oo warshadda ay weheliso macdano muhiim ah!
KU SAMEE IN GERMANY! Tayada shirkada tayada leh ee leh tayada korantada ee joogtada ah iyo heerarka adag ee soosaarka iyo horumarka!
Qalabka kaadi sonkorowga Adia, unug mg, oo leh xiniinyaha tijaabada gulukoosta dhiig ee 60, aaladda daloolinta iyo cirbadaha 10 ee tilmaamaha kormeerka gulukoosta dhiigga
Miayaga mitirka sonkorta dhiiga Adia oo ay kujirto xariijimo tijaabada gulukoosta dhiig ee 60, aaladaha daloolinta, cirbadaha 10, xusuus qor iyo bac: Waxay ku habboon tahay bilawga. Halbeeg cabir ah, oo badanaa lagu isticmaalay Galbeedka Jarmalka
Tayada ugufiican: Waxay lashaqaysaa heerarkii ugu dambeeyay ee DIN, kontoroolka tayada joogtada ah. Khadka tooska ah ee Jarmalka oo leh khabiiro sonkorow iyo lambar taleefan bilaash ah haddii aad u baahato caawimaad.
Mitirka gulukooska Adia: Qalabka cabbiraadda ayaa isla markaaba diyaar u ah in lagu cabbiro gelinta xariijinta tijaabada: looma baahna nambar codsi (autocoding), soosaar aad u weyn oo iftiiminaya, natiijooyin deg deg ah oo kaliya 5 sekanno
Badhanka ka-saarista nadaafadda ee suunka tijaabada gulukooska dhiigga ee la isticmaalay. Xusuusta weyn oo leh xirmooyinka xusuusta ee 365: Tani waxay ku siinaysaa aragti wanaagsan oo ku saabsan sonkorowgaaga. U gudbinta xogta PC-ga waa suurtagal.
Badbaadi mustaqbalka! Xargaha tijaabada sonkorta dhiigu aad ayey ugu jaban tahay Amazon. Baaxadda gaarsiinta shaxdan: mitirka gulukoosta dhiigga, kiiska, xargaha loo yaqaan '10', qalabka daloolinta, 60 xargaha baaritaanka gulukoosta dhiigga
Qalabka Xiga ee Xiga 50, 1er Pack (1 x 50 Piece) Shaxda
Sensors ee go'aanka sonkorta dhiigga
Saxnimada cabbiraadda quruxda badan
iHealth ALIGN BG1 Iskuxirnaanta Dhiigga Gulukooska MeterDisplay
Cabbiraadda iyo kormeerka heerarka gulukooska dhiigga ee loogu talagalay bukaannada macaanka
Ku muuji natiijooyinka cabbiraadda barnaamijka iHealth Gluco-Smart ee bilaashka ah (is-dhexgalka wireless-ka iyada oo loo marayo Bluetooth 3.0)
Ku xir xarafka codka "3.5" ee casriga / kiniiniga
Xaraynta iyo la socoshada tirada iyo taariikhda uu dhacayo ee xargaha tijaabada gulukoosta dhiig ee loo maro QR code
Natiijooyinka cabbiraadda precise iyadoo loo eegayo ISO 15197: 2013
Maqaalka horenadiifiye ridaysa vacuum